Mai Chibwe VekwaZimuto: Nyaya yema -RHAUNDHI
Ukahwa varume vachitaurirana nezvemaRHAUNDHI ungatofunga kuti chinhu chacho chinohi RHAUNDHI chinhu chinoshamisa asi ukazobvunzisisa unohwisisa kuti RHAUNDHI zvinoreva nguva yemurume, kubva paanopinza chombo mumukadzi wake kusvika paanpedza kudiridzira.
Ukahwa murume anotaura nezvema RHAUNDHI ziva kuti murume wacho haanatsi kuhwisisa kuti chii chinonakira mukadzi wake panyaya idzi. Anofunga kuti kuwanza maRHAUNDHI ndiko kunonaka. Unotohwa murume mukuru achitaura ne Konifidhenzi kuti "Ndakamurova maRHAUNDHI matatu ndikafara zvokuti."
Mufungwa make anototi mukadzi akanakigwa nazvo chero RHAUNDHI imwe yange iri maminitsi maviri kana matatu. Anofunga kuti kushaisa mukadzi hope usiku hwese ndiko kunonaka. Kufunga kwakadai kunoitiswa nokusaziva mafambire ezemo remukadzi. Pakurhojewa, mukadzi anorhojewa kuti zemo ripere. Hino kana ukahi minuti imwe chete kana mbiri, wodiridzigwa, wohi chimirira maawa maviri uchingonetseka nezemo, wapinzwazve wodiridzigwa kwapera maminitsi maviri, wohi chimirira futi, Zemo ipapo raperera papi. Zvinototsamwisa pane kunaka. Hakuna mukadzi angatoti arhojewa pakadai. Kana murume achida kuzvinyebera kuti agona basa, regai azvinyebere hake asi chokwadi chiri pachena kuti zvaiva nani kuti dai asina kutombotanga basa raasingagoni. Apa angozviitira iye, mukadzi zvatomusembura.
Hino akazodai zuva nezuva, uripo mukadzi unoti uchamuudza nhema, newewo wongopedzisira woramba kuvata naye. Kwahi na Sisiria akandinyorera nenyaya yake pakupihwa rhoji yemaRHOUNDHI kwahi, "Ndakapedzisira ndonyebera murume kuti ndiri kumwedzi asi ndapedza kare, apa ndaona kuti chandiri kunetsegwa hapana. Asi ndakashaya kuti ndoudza murume sei kuti aite basa zvakanaka nokuti tange tagarisa ndichingoshandiswa seizvi ndakanyarara."
Murume waSisiriya akazowana basa kuKadoma ndokusiya mukadzi nevana kumusha. Kwahi zvave nani nokuti anouya kumusha kaviri pamwedzi ozoita hake zvemaRHOUNDHI zvake izvozvo odzokera.
Varume hameno kuti sei musingatereri. Nguva yaunopedza uri mukati uchikoira mukadziwo achikupa chikapa ndiyo inonaka kwete kuti wamudiridzira kangani. Kumukadzi zviri nani kupinzwa woshandwa kwe10 minutes plus, wohwiswa pane moyo, mobatwa nehope mese movata. Kana murume wacho zvokukumukira usiku haambozozviiti. Kana ngonono chaidzo haaridzi. Iwewo unovata hope dzakanaka. Kana une murume akadai, hwisisa kuti musati mavata wodzima zvinhu zvingaitisa moto mumba nokuti chero ikatsva haumuki.
Kunotozoti kwaedza ndipo paunohwa murume opfakanyika. Murume akadai haumbohwi achitaura nezvemaRHAUNDHI. Mukadzi wakewo haumuhwi achiita zvehasha kana kupopota. Munhu akapfava hana akazvitembha, anoziva kuti akawanikwa nani uye pamusha pake ndepapi. Musi waanoudza murume kuti ari kuhwa musoro, murume anobva aziva kuti musoro chaiwo kwete wekuda kuramba kuvata nomurume.
Handidi kuwanza nyaya iyi asi kungoti ngatikurudzirei varume vedu kuti zvokuverenga maRHAUNDHI handizvo. Chero chimwana chiri mu Grade 2 chinokwanisa uverenga kusvika ku3. Mumba mukadzi anoda murume anoti afidhiwa oziva kuti zvaitigwa kuti agotora nguva pabasa tigovata zvakanaka. Munhu verengawo kuti mukadzi wako aita maORGASM mangani kwete kuti iwe wamupinza kangani. Pane kuzvirova dundundu tanga waona mukadzi wako achizvirova dundundu kuti akagona kusarudza.
Varume hwisisai kuti ukapinza chombo mumukadzi wako ukamukoira kwenguva yakareba ndizvo zvinonaka izvozvo. Kana wangomudiridzira chete, mukati munozara urume, kukwizirana kwechombo nechitubu koita kushoma, ukuzve mukadzi anotanga kuvhinza urume zvokuti unoona achizvipukuta, fungwa yotanga kubhowekana nomurume kuti sei apedza ini ndisina kupedza. Hino ipapo varume vakawanda unoona obatwa nehope mkadzi azere zemo. Kufunga kuti unogadzirisa nyaya nokuzomukirawo mukadzi hazviiti zvachose. Kutowedzera kubhowa mukadzi wako zvisina kana basa.
Apa handisi kuti hatidi kumutsigwa zvinhu. Kana murume akapepuka pakati peusiku akafunga zvokuwedzera, ngaawedzere hake. Hapana chakaipa. Asi ipapo pokutanga pedza mukadzi shungu avatewo hope. Zvinhu izvi ndezvedu tese saka ngatigute tese. Vakadzi vakawanda vanoti murume apedza RHAUNDHI yake akabatwa nehope iye mukadzi osara akasvinura zemo riya ratangwa risina kupera asi kuti ratowedzera, obva abvibatsira nemaoko. Vazhinji vakatozodzidza zvemaoko izvi varoogwa iri ngari yevarume vemaRHOUNDHI. Varume hwisisaiwo Please.
RHAUNDHI handiyo inonaka. Murume kana atora zhira nefungwa yemarhaundhi, chiziva kuti upenyu hwekunakigwa hwatopera kusvika adzidza kuti uri munhuwo anotodawo zvaanoda iye. Unongomuka zuva nezuva wakazadzwa urume mukati nemuzvidya asi zemo risina kupera. Ukasatozvibatsira iro bhinya rako ravata unoona kuti hapana chako pamusha uyu. Iye anongoita chandagwinyira wemarhaundhi.
Varumewo hwisisai kuti marhaundhi ndeezvikomana zvekumusha zvinofudza mbudzi zvisanhi zvahwisisa kuti mukadzi anobatwa sei. Murume mukuru siyana nemarhaundhi upfidzise mukadzi wako ipapo paunotanga kumuisa. Ipapo ngaazive kuti aiswa, kwete kumusiya ari pakati iwe wombovata hope, wozomuka futi uchida kupedzisa mukadzi atambura nezemo maawa matatu. Wufuza hwakadii uhwu. Varume tipeiwo masiriyasi panyaya iyi. Ten minutes uri mukati uchiita basa ipapo pokutanga ukuwo uchikwenyerera bhinzi nokusveta zamu kana mutsiba, uchiterera kuchemerera kwemukadzi wako.
Kwete kuzoda zvokumukira iwe wambomutadza uye wambobhowa mukadzi. Hazvisizvo. Titaridzeiwo kuti tine varume mudzimba. Ndigoti nhasi ndazvipedzisa zemo, mangwana ndozvipedzisazve, mwedzi wese ndisinawo kumbohwiswa pane moyo here? Ndogoti murume ndomudii? Ndakaroogwa nemaoko angu here? Pano ndakatouyawo nokuda kwekuti iwe murume wangu uri pano. Ibasa rako kundigutsa pakuvatana kwedu. Itawo masiriyasi nenyaya iyi udzidze kunonoka kudiridzira ndinakigwewo sezvaunoita. Murume itawo shungu dzokurhoja mukadzi wako zvinonaka. Kana wada kupamhidzira pamhidzira hako asi gutsa paRHOUNDHI yokutanga iyoyo ndichine zemo rakawanda.
Panyaya iyi vanhukadzi tiri tese hedu. Varume tatosiyana navo kare kare. zvinotovashungurudza kuti inyaya yeiko iri pano nokuti mhomho yavo inofunga kuti kupinzwa kwemaminitsi maviri kukaitwa kashanu pazuva kunonaka kupfuura kupinzwa kwemaminitsi gumi kwaitwa kamwe chete. Bodo handizvo. Zemo rinoda kuti wapinza kokutanga wotora nguva woripedza. Usabatwa nehope mukadzi achine zemo. Pedza zemo rake mugovata henyu. Zvemarhaundhi siyira zvanana zvemahumbwe.
Aterera ahwisisa ngaachienda anoita zvinodiwa.
Posted by Mai E Chibwe at 12:47